Bangiyadda & Kaydka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Bangiyadda & Kaydka
Lacagta suuqa’ ‘waa halka maaliyada, damaanad sare iyo miisaaniyada aadka u gaaban’. Guud ahaan marka la raba in la sharaxo suuqa lacagta waxaan isdhihi karaa in horey loo fahmi karo macnaha guud ee ay xambaarsantahay suuqa lacagta. Lacagta mararka qaar waxay noqotaa ‘badeeco si lacag kale loo abuuro. Haddii aan u sameyno macnayaal kala duwan sidda haddii ay shirkadaada soo iibsato agabyada sidda kuraasta, makiinadaha, kombuuterada iwm, waxay ka dhigantahay inaad qarash ku bixisay si aad agabyadaasi ugu abuurto lacag kale. ‘macnahiisa ma ahan inaad sii iibinayso ee waa sahaydii aad dagaalka ku geli lahayd. Hadaba, dhammaan qodobadaasi ma …
Qiima dhaca Shillin Soomaaliga waa mid walaac aad ah leh, wuxuuna keenayaa inuu kordho qiimaha badeecadda dibedda laga keeno oo ay ku jiraan cuntooyinka qaar iyo shidaalku. Saamaynta qiima dhaca Shillinka Soomaaligu wuxuu taabanayaa dhammaan bulshooyinka ku nool miyiga iyo magaalooyinkaba. Qiimaha dhaca Shilling Soomaaliga waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin badan, waxayna si weyn u saameysay bulshada danyarta ah. Xaaladda xubinta cuntada iyo nafaqada ee dhulka xoola-dhaqatadu waxay tahay mid ka sii daraysa. Gobollada dhexe, xaaladda jidhka, wax-soo-saarka iyo qiimaha xooluhu waxay ku socota mid sii xumaanaysa, waxaana la soo sheegayaa in ay xoolo dhinteen daaqa oo gabaabsi ah iyo cudurrada …
Qormadan waxeynu ku lafo guri doonaa waxey kala yihiin Sakada & Cashuurtu, farqiga u dhaxeeya iyo faa,iidooyinka ay leeyihiin labadaba. Aynu ku horeyno Sakada, Sakadu waa waajib saaran qof kasta oo Muslin ah oo Miyirkiisa & Maankiisuba taam yihiin, sidoo kale waxa ay ka mid tahey tiirarka ay ku dhisan tahey diinta Islaamku, Sakadu waxey leedahay faa’iidooyin badan oo ay ka mid yihiin in naxariista adoomaha dhexdoodu badato, in qofkii hayntiisu fiicantahey uu kaga badbaado xaasidka iyo xasarada Hantidu keento mood iyo nood ba kay doonto ha ahaatee, sakadu waa waajib Alle (SW) kugu kor yeelay aduun iyo aakhirana …
Hanti Dhawr (auditing) Hanti dhawrku waxa uu soo hoos galaa xisaabaadka, waa xaqiijinta isu sar goynta amaba hubinta lagu sameeyo shirkada iyadoo la adeegsanayo habab u gaara iyo xeerar loogu talo galey ku shaqeeyaan Hanti dhawrayaashu. Hanti dhawrku wuxu u qeybsamaa laba nooc oo kala ah mid gudaha ah oo ay shirkadu ugu talo gashay inuu ka saxo wixii khaladaad dhexdeeda ka jira, waxaanu warbixinta uu diyaariyo u gudbiyaa maamulka shirkadaa amaba goobtaa u ka hawl galey, halka ay jiraan kuwo dibadda ah oo madax banaan cid ka baxsan shirkada gudaheedana warbixintoodu way gaadhaa. Waxa la baadhaa way badan …
Bangiyadda & KaydkaMaqal & Muuqaal
Xisaab ama xisaabin waa hab ka mida hababka lagu ilaaliyo, daba galo isla markaana loo kaantaroolo dhaqaalaha amaba lacagaha, ha noqoto tu dawladeed iyo tu shaksi tay doontabee, wax aan xisaab iyo hab xisaabeed dhisan laheyna inaaney kala soconeyn horeba waa loo soo taabtey. Xisaabintu waxey u kala baxdaa noocyo badan iyadoo waliba laga eegayo dhinacyo badan, balse qormadan waxeynu kusoo qaadan doonaa qeybahan soo socda. Xisaab maaliyadeed (Financial Accounting) Xisaab maamul (Management Accounting) Hanti dhawr ( Auditing) Cashuur ( Taxation) Xog bixinta Xisaabaha ( Accounting Information System) Aynu ku horeyno Xisaab maaliyadeed, Xisaab maaliyadeedeey maxay tahey? Waxa ay diirada …
Maanta Wax Meel Dhigo Si’aad Berito Ugu Baxsato |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 26, 2016
Qofwalbo oo bini’aadam ah wuxuu u baahanyahay inuu nolosha guullo badan ka gaaro, balse marwalbo waxaa jira caqabadaha ay sidato nolosha. Si aad guullo badan u gaari karto waxaa wanaagsan inaad ka fakirto xagga dhaqaalaha, inaad isweydiiyo dhaqaallo intee la’eg ayaad ugu baahantahay inaad sameyso ganacsi heerkaas oo kalle. Su’aalahana oo kalle waxay kaa saacideysaa inaad fiiro gaar ah u yeelato qaabkii aad ku gaari lahayd horumarka aad rajeynayso. Waxaa macquul ah inaad marwalbo ku fakirayso inaad wax meel dhigato balse wey adagtahay inaad wax meel dhigto marmarka qaar, dhibaato adiga ku haysato ma ahan ee waa dhibaato nafsada aadanaha …
Bangiyadda & KaydkaWARBAAHINTA
Ma dooneysaa Fikrado Cusub oo Shaqa Abuur Ah (small investments ) |Tukesomalism.com
Hadaad ka daashay shaqa la’aan inaad la fadhiisatid gurigaada, wadooyinkana aad la taagnaatid waxaan kugula talinaaya inaad waqtiga iska lumin, waqtigu waa qaali intaad dhalinyaro tahay ka faa,iidayso . Akhristow halkaan waxaan kuugu soo bandhigaaya fursad aad ku abuuran kartid shaqo gooni kuu ah oo aad ka faa,iidid waxbadan oo lacag ah. Marka hore inta aanan kusiin fikradaha cusub oo aad ku shaqaysan kartid. Waxaa loo baahanyahay inaad is waydiisid su’aalahan soo socda: 1-waa maxay ujeedka aan u dhisaayo mashruucayga? 2- waa maxay shaqooyinka aan qabsan karo oo aan awooda uleeyahay ? 3- waa maxay mashaariicda ugu waaweyn oo maalgalin badan …
Bangiyadda & KaydkaDhaqaalaha iyo SiyaasaddaMaalgelinta & Maaliyadda
Shir balaaran oo ay isugu yimaadeen Guddiga Maamulka Maaliyadda ee dowladda Soomaaliya iyo khubaro ka socota hay’ada lacagta IMF ayaa looga dooday qaabka ugu haboon ee lacag shilin Soomaali ah dalka loogu samayn lahaa, dhibaatooyinka ka dhalan kara hadii la soo daabaco lacag been abuur ah iyo wada tashi balaaran oo laga yeesho habka loo wajahayo samaynta lacag shilin Soomaali ah oo cusub. Guddiga ayaa faah faahin dheer ka bixiyay cida xaqa u leh in ay soo daabacdo lacag badali karta shiling Soomaaliga sii dabar go’aya, iyo dhibaatooyinka ka imaan kara hadii aan laga yeelan wada tashi buuxa, loogana danbayn …